Taranaka voakolo, firenena mandroso - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Taranaka voakolo, firenena mandroso
Rasolonjatovo Willy il y a 5 jours
Nanatontosa famorana faobe ho an’ireo zaza sahirana ao amin’ny boriborintany faha enina ny Ong Andry Fanabeazana Fanarenana Mirindra afohezina amin’ny hoe Affami ny sabotsy 18 jona 2022 teny Ankazomanga.
Manodidina ny 70 ireo zaza noraisin’ny Fikambanana Affami natao hasoavana tamin’io andro io. Ny famorana faobe moa dia asa efa fanaon’ity Ong ity efa hatramin’ny ela saingy niato kely izany nandritra ny fipariahan’ny valan’aretina corona virus teto amintsika. Iantohan’ny fikambanana ny fanafody, ny kilalao, ny malabary... « Ao anatin’ny fahasahiranana tokoa ireo ray amandreny amin’izao fotoana ka izay no antony nandraisan’ny fikambanana izany fanapaha-kevitra izany » hoy Rtoa Raherisoa Victorine Vololona, Filoha mpanorina ny Ong Affami. Tena lafo tokoa ny fanaovana ny circoncision à l‘américaine kanefa dia atao maimaipoana izany ho an’ireo zaza manodidina ny 70. Izany no natao dia ho fanampiana an’ireo ankizy sahirana eny amin’ity boribontany ity. « Miezaka manampy araka izay tratra sy izay kely vita ny fikambanana» hoy ihany izy.
11 taona mahery no nijoroan’ny Affami. Tsy nitsahatra nanao asa soa tao anatin’izay taona maro nisiany izay. Nanao famoran-jaza faobe foana rehefa ririnina tahaka izao. Mizara arendrina ho an’ny ankizy rehefa tonga ny fetin’ny fahaleovantena, ary tsy adino tamin’izany koa ireo zokiolona, ireo renim-pianakaviana sahirana, izay miady amin’ny fiainana dia nomena ireo zavatra ilaina amin’ny fiainana andavanandro, toy ny vary, menaka, savony…
Misehatra eo amin’ny lafiny fanabeazana ihany koa ny fikambanana satria mila fanabeazana ara-batana ara-tsaina ary ara-panahy ny ankizy. Tsy adino ny zaza sahirana ka nanangana ny ankany nikarakarana an’izy ireny ny fikambanana. Niato kely teo noho ny covid. Efa eo am-pamerenana ny asa rehetra fanaony ny Affami amin’izao fotoana. Raha ny fanombanana ireo asa vita dia efa manodidina ny arivo ny zaza vita raha ny forazaza. Ny eo amin’ny fanabeazana kosa indray dia misy ny fanofanana ireo tanora tsy an’asa, nampianarina teny vahiny, fampianarana informatique, ny fampianarana zaitra. Efa an-jatony izy ireo. Teo ihany koa ny fandraisana ireo ankizy madinika tamin’ny préscolaire.
Ny ong Affami izay manana ny teny filamatra hoe : « Taranaka voakolo firenena mandroso » dia misehatra bebe kokoa amin’ny sosialim-bahoaka hatramin’izay nitsanganany. Inoana fa hirotsaka bebe kokoa amin’izao fotoana, izay tena mahalatsaka ny vahoaka ao anaty fahasahiranana tanteraka.
Tontolo iainana : Hatsaraina ny fari-piainan’ny VOI ary ahena ny fiankinan-doha amin’ireo haren-javaboaary ao an’ala. - il y a 7 jours